Nezvedu - Shijiazhuang Retool Stainless Simbi Zvigadzirwa Co, Ltd.
Zvidimbu ZveMuchina Zvekudya
Alloy Simbi Zvidimbu
Zvikamu zvekurapa zvePamusoro
Isu tinoita zvinhu zvishoma zvakasiyana, uye ndiyo nzira yatinoda nayo!
Kambani Yedu ———
Shijiazhuang Retool Stainless Simbi Zvigadzirwa Co, Ltd ndeyokubatana bhizinesi bhizinesi, rakagadzwa muna 1994. Retool locates muXinzhaidian Industry Area, Shijiazhuang guta, ine mukana wekufambisa uye wepamusoro nzvimbo. Retool Kambani inonyanya kuita dhizaini uye kugadzira emhando dzose dzemavhavha uye kugadzirwa kwekudyara mari yekukanda zvikamu uye michina zvikamu. Kunyanya akazvipira kune yakakwirira-kugumisa chaiyo kukanda uye yakadzika kugadzira yesimbi isina simbi, kupisa sutu-inopisa simbi, kupfeka inodzivirira simbi, kabhoni simbi, uye akasiyana alloy zvinhu.
——— Zvitupa ——
Tinokwanisa kugadzira zvinoenderana neyakajairwa ASTM, DIN, BS, JIS etc. uye tinokwanisawo kupa ese marudzi ekupisa kupisa uye pamusoro kurapwa.
Tinogona kukanda uye kushandisa michina mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa kana samples vatengi vanopa. Kukanda chaiyo yakakwira, uye mhando yakagadzikana.
——— Kambani Mission ——
Retool Kambani inosimbisa pakubudirira kwesainzi sekusimudzira, kunaka uye kunaka sekusimbisa kwavo mberi. Isu tange tichitsvaga yakanyanya kunaka chikwereti chakamira, nyika repasi yemhando uye yeprimiyamu service. Isu tinoshuva nemwoyo wose kushandira pamwe vekunze uye vekumba shamwari uye tiite-mbiri ramangwana rakanaka.
——— Chigadzirwa Chekugadzira ——
Chigadzirwa chedu chigadzirwa chinofukidza mavharuvhu, mavheji zvikamu, chikafu michina yezvikamu, pombi zvikamu, peturuleum indasitiri zvikamu etc. Zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nenyika mwero, American standard, chiJapan chinowoneka uye cheGerman standard. Zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kutengeswa kuUnited States, Canada, Italy, Germany, Japan, Korea nedzimwe nyika.
Retool kambani ine makore angangoita makumi maviri nemasere ruzivo mukukanda chaiko. Ichaunzi iwe sarudzo, nyore, uye yemakwikwi mutengo. Isu tinotenda kuti tichakwanisa kukupa iwe nebasa repamusoro uye zvigadzirwa zvakanakisa.
Retool Kambani mubatsiri anovimbwa naye mukukanda indasitiri. Isu tinoshandisa kuvimba uku uye tinoshandisa ruzivo rwedu kuenzanisa zvaunoda zvekukanda. Vagadziri vedu vane ruzivo mune zvese zvikamu zveindasitiri yekukanda. Isu tinogara tichingopa yepamusoro pamhando uye isu tinonyatsotonga maitiro ese ekugadzira sekureva ISO9001.
No.3 Mingzhu Road, Xinzhaidian Indasitiri Nzvimbo, Zhaoxian, Shijiazhuang, China